आजबाट पशुपति मन्दिर ब’न्द ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठउपत्यका काठमाडौँआजबाट पशुपति मन्दिर ब’न्द !
काठमाडौं– नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना बढ्न थालेपछि आजदेखि पशुपतिनाथ, गुह्येश्वरीलगायत पशुपति क्षेत्रका सबै मन्दिर ब’न्द गरिएको छ ।कोरोना जो’खिमका कारण पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यस क्षेत्रका सबै मन्दिर भक्तजनका लागि ब’न्द गर्ने निर्णय बिहीबार दिउँसो गरेको थियो।
विभिन्न स्थानमा सूचना टाँ’स गरी मन्दिर ब’न्द गरिएको जानकारी गराइएको थियो। सूचना थाहा नपाएका केही भक्तजन आज बिहानै मन्दिर पुगेका थिए। केही नित्य दर्शनार्थी पनि पशुपतिनाथ परिसर पुगेकामा सु’रक्षाकर्मीले फर्काएपछि बाहिरबाटै दर्शन गरेर फर्केका छन्। मन्दिरका ढोका नै ब’न्द गरी पशुपति क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको कोषले जनाएको छ।
पशुपतिनाथ, गुह्येश्वरीलगायत मन्दिरमा नित्य पूजा भने निरन्तर जारी रहने कोषका कोषाध्यक्ष डा मिलनकुमार थापाले जानकारी दिए। विश्वभर फैलँदै गइरहेको नयाँ भे’रियन्टसहितको को’भिड–१९ को सङ्क्रमण नेपालमा समेत बढ्दै जान थालेपछि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सङ्क्रामक रो’ग ऐ’न, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड जारी गरेकाले त्यसैअनुसार मन्दिर ब’न्द गरिएको कोषले बिहीबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
सोही ऐ’नको द’फा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पशुपतिनाथ, गुह्येश्वरीलगायत मन्दिर ब’न्द गरिने उनले बताए। पशुपति क्षेत्रका मठ मन्दिरमा नित्य पूजाबाहेक अरु सबै क्रियाकलाप गर्न नि’षेध गरिएको छ। यसबाट भक्तजनमा पर्न गएको अ’सुविधाप्रति कोषले क्षमा मागेको छ।
गत वर्ष पनि कोरोनाबाट बच्न जारी ब’न्दाबन्दीका कारण नौ महिनासम्म पशुपतिनाथ, गुह्येश्वरीलगायत मठमन्दिर भक्तजनका लागि ब’न्द गरिएको थियो। विसं २०७६ चैत ११ गतेदेखि ब’न्द गरिएको मन्दिर २०७७ पुस १ गतेदेखि बिहान छ बजेदेखि १ बजेसम्म भक्तजनका लागि खुला गरिएको थियो।
विशेष पूजा भने महाशिवरात्रिका अवसरमा फागुन २५ गतेदेखि मात्र शुरु भएको थियो। मन्दिर भने महाशिवरात्रिका अवसरमा फागुन २७ गतेदेखि मात्र सा’विकबमोजिम नै पूरा समय खुला गरिएको थियो। अन्य क्षेत्र खुला गरिँदासमेत पशुपतिनाथ, गुह्येश्वरीलगायत मन्दिरमा भक्तजनलाई प्रवेश नदिइएको भन्दै विश्व हिन्दू महासङ्घलगायत सङ्घ संस्थाले वि’रोधसमेत जनाएका थिए।
मन्दिर ब’न्द गरिएसँगै पशुपति क्षेत्रको घाट सेवामा पनि सरकारले तोकेको ’मापदण्डभन्दा बढी मानिस उपस्थित नहुन कोषले आम मानिसमा आह्वान गरेको छ। घा’ट सेवामा आउने सबैलाई अ’निवार्यरूपमा मास्क लगाई स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाउन कोषले आ’ह्वान गरेको छ। पशुपति क्षेत्रका सबै मन्दिर ब’न्द गरिएपछि भे’टीघाटीबाट कोषलाई हुने आम्दानी पनि ब’न्द हुने भएको छ।
पशुपति क्षेत्रमा गत वर्षदेखि नै विदेशी पर्यटक आएका छैनन्। विसं २०७६ चैतदेखि पशुपति क्षेत्रका सबै पर्यटक टिकट का’उन्टर ब’न्द छन्। कोरोनाका कारण पर्यटक आउन छा’डेपछि पर्यटक गाइड तथा पर्यटकका लागि लक्ष्य गरी विभिन्न सामग्रीको व्यापार व्यवसाय गरेकाहरुसमेत म’र्कामा परेका छन्।